Aqoonyahankii falsafiga ahaa ee la oran jiray Platon oo u dhashay dalka Giriigga, oo noolaa 2 500 sano ka hor, wuxuu aasaasay dusgi (iskuul) la oran jiray "Akadeemiyada Platon" oo ku taalay magaalada Athens, caasimadda dalka Giriigga. Albaabka laga galo iskuulkaas waxaa ku qornaa: " qofkii aan aqoonin xisaabta joometeriga ma soo geli karo gurigan".
Waxaa la oran karaa waxaa halkaas ka muuqata muhiimadda ay leedahay maaddada xisaabta, gaar ahaan qeybteeda joometeriga oo waqtigaasi ay aqoonyahannadu gaarsiiyeen muhiimad aad u sareysa. Platon ma uusan aheyn xisaabyahan!
Waxaa isla xilligii uu noolaa Platon isagana noolaa nin la oran jiray Euklides. Euklides wuxuu wax ka bartay iskuulkii Platon wuxuuna ku taqasusay aqoonta joometeriga, isaga oo qoray in ka badan 20 buug.
Waqti dheer ka hor intii ay noolaayeen Platon iyo Euklides waxaa jiray in Maasaaridii hore iyo Baabiliyoonkii hore in ay xiiso aad u weyn u hayeen joometeriga. Xaglaha iyo joometerigu waa cilmi loo adeegsado in lagu xalliyo su'aalaha la xiriira cilmiga falagga (cilmiga xiddigaha) iyo dhismaha. Waana arrin la aqoonsanaa xilligii uu noolaa aqoonyahankii Pythagoras, kaas oo ahaa ninkii caddeeyey xiriirka ka dhexeeya dhinacyada saddexagalka quman. Pythagoras wuxuu noolaa 1 500 sano kadib xilligaas hore.
Qalabka loo yaqaanno jiheeyaha wuxuu ka kooban amaba loo qeybiyaa 360 digrii ama darajo. Akhrinta qalabkaas waxa uu kuu fududeynaayaa in la fahmo hawada iyo jihada.